Mandeha mamakivaky ny tanin'i Irlandy Equestrian - IntoKildare
County Thoroughbred, Fitsidihana voalohany, Zavatra tokony hatao
3 Andro, 238 km, 148 kilaometatra
Làlana: Kildare mankany Louth, avy any Westmeath sy Meath
Toetoetra: Stud Nasionaly Irlanda, Ny Curragh
Fitsangatsanganana momba ny dia
Ankafizo ireo fientanam-po haingana, filana ary fahafinaretana madio amin'ny hazakazaka mandritra ity fitsangatsanganana mpitaingina hazakazaka mandritra ny telo andro ity. Manomboka amin'ny sasantsasany amin'ireo zana-kazo miavaka indrindra eto an-tany ka hatramin'ny kijana maitso mangina sy any an-tsahan'ady izay nanorenan'ny soavaly ady ny làlan'ny tantaran'ny tantara. Ity fitsidihana ity dia hitondra anao any afovoan'ilay tanin-tsoavaly any Irlandy, miaraka amina fahagagana maro eny an-dalana.
Andro 1: 31 min, 12 km, 7 kilaometatra
Mandeha ny fikotrokotroka, fidobodoboky ny fo, firavoravoan'ny vahoaka - miomàna hamonjy ny hazakazaka.
Ao anatin'ny 20 minitra avy, dia hahita roa amin'ireo hazakazaka fifaninanana tsara indrindra eropeana ianao: Punchestown ary ny Curragh. Miaraka amin'ny fahatsapana hafa tanteraka, ny Tranombakoky ny Miaramila Curragh tsy lavitra teo dia nifantoka tamin'ny tantaran'ny tafika tao amin'ny fampirantiana mahavariana izay nanambara ny fomba nampiasana ireo zaridaina ireo tamin'ny 1686, miaraka amin'ireo soavalin-tafika ary miaramila anglisy nandritra ny WWI. Mankany amin'ny kijana maitso, amboary ny masonao manaraka eo amin'ny Stud Nasionaly Irlanda. Eto, ny soavaly mifangaro amin'ny kintana - na farafaharatsiny mba fanaony - noho ny finoanoam-poana nataon'ny mpanorina ny stud, Kolonely William Hall Walker. Ny kolonely dia nanamboatra tabilao nahaterahana ho an'ny tsirairay ny foal, ary raha tsy tiany ny kintana, dia amidy ilay foal. Ao amin'ny tranombakoky ny stud dia azonao atao ny mamaky ny tabilaon'ny zanak'ampondra tsy mendrika antsoina hoe Lord of the Sea: "Saturne ao amin'ny tranony faha-5… dia tsy dia nahasoa azy loatra amin'ny hazakazaka na hazakazaka… tsy misy ilana azy afa-tsy ny fivarotana." Ny fanandroana mpitaingin-tsoavaly dia toa iray kilaometatra miala ny manodidina azy Zaridaina Japoney, noforonin'i Walker koa niaraka tamin'ny fanampian'ny master hortikulturista Tassa Eida avy any Japon. Toerana tsara tarehy very fotoana.
Hevitra mahaliana: Pacuncourse Punchestown, Ny Curragh Racecourse, tranom-bakoka miaramila Curragh, Stud Nasionaly Irlanda & Zaridaina Japoney
Raha manam-potoana bebe kokoa ianao
Ao amin'ny Goffs, orinasam-barotra fivarotana mpandatsa-dra any Irlandy, varotra fandatsahan-dra valo no atao isan-taona. Hetsika mampientam-po izy ireo feno hetsika haingana sy soavaly tsy mampino. Ao Kilcullen, Berney Brothers Saddlery, natsangana tamin'ny 1880, dia fampisehoana asa-tanana tsy manam-paharoa, fahaizana ary fahalalana ho an'ny mpitaingin-tsoavaly.
Andro 2: 2 ora 13 min, 114 km, 71 kilaometatra
Làlana: Kildare mankany Westmeath
Hevitra mahaliana: Vohitra Kildare, Lullymore Heritage & Discovery Park, Kilbeggan Pacecourse
Atombohy amin'ny fitsaboana kely amin'ny fivarotana any Kildare Village, fivarotana fivarotana lehibe indrindra any Irlandy, alohan'ny hamenoana solika miaraka amin'ny croissant sasany ao Le Pain Quotidien, toerana voalohany any Irlandy ho an'ny rojo boulangerie ambony.
Ireo hedgerows verdant dia mankeny amin'ny Lullymore Heritage and Discovery Park. Ankehitriny zaridaina ivelan'ny trano miroborobo miaraka amin'ny trano honina, Biodiversity Walk ary Village Fairy, Lullymore dia fialokalofana monasita tsara tarehy taloha. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-18, niova izany rehetra izany rehefa novonoina ho faty ny olon-drehetra afa-tsy moanina iray, Thomas Foran.
Tohizo ny lalanao mba hahitanao ny Grand Canal - teo anelanelan'ny 1834 sy 1852 ny serivisy "sambo manidina" haingana dia haingana no niasa tamin'ireo rano ireo, miaraka amina soavaly roa mitaingina sambo haingam-pandeha manodidina ny 7km (naharitra 13 ora ny dia avy tany Dublin nankany Athy!)
Manaraka izany dia ny Kilbeggan Racecourse, nofaritan'ny Sunday Times ho toy ny manana fiangaliana izay «mametraka racetracks lehibe kokoa - toy ny Royal Ascot - ao anaty alokaloka». Hatramin'ny taona 1840, ity taranja ity dia misy tantara zaraina marobe ihany koa - amin'ny manaraka mametraka ny filokanao ianao, mieritrereta ilay mpandresy Grand National tamin'ny 1916 izay voatery nandeha an-trano noho ny fisandratan'ny Paska!
Tsidiho ny trano famokarana whisky tranainy indrindra any Kilbeggan. Mamandraha mialoha mba hahitanao ny teti-bolan'ny varotra, ary fantaro raha tena manenjika ilay zava-manitra. Na miditra ao amin'ny Roche's Pub any Donadea. Tsia - tsy maka sary an-tsaina zavatra ianao. Ity trano fisotroana ity dia milentika tsimoramora ao amin'ny lava-bato nananganana azy. Naorina tamin'ny taona 1800 dia nilentika nandritra ny zato taona mahery izy io.
Andro 3: 1 ora 47 min, 113 km, 70 kilaometatra
Hevitra mahaliana: Navan Racecourse, Brú na Bóinne, Ady an'ny Boyne Visitor Center, Laytown Strand
Ny fametrahana ny feo tanteraka ho an'ny dian'ny anio dia mandehandeha eraky ny zavamaniry sy voninkazo 5,000 19 ao amin'ny Altamont Gardens gaya Robinsonian, taonjato faha-XNUMX.
Ity lohahevitra maitso ity dia manaraka hatrany rehefa manohy mankamin'ny “Garden of Ireland” ianao, izay toerana misy voninkazo maitso mandrobona maintso feno voninkazo maintso feno voninkazo volombolon'i Wicklow. Saingy aloha, ny tanànan'i Wicklow dia mihetsika miaraka amin'ny tantara somary feno habibiana hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-18 tao Wicklow Gaol. Anisan'izany ny tantaran'ireo voaheloka nafindra tany Wicklow nankany Aostralia, indraindray noho ny heloka bevava fotsiny tamin'ny fangalarana mofo.
Avy amin'ireny antsoina hoe 'Gates of Hell' ireny ka hatrany am-pon'ny fahatoniana Wicklow ao Glendalough, malaza amin'ny farihy roa sy ny rivo-panahiny. Ao amin'ny tanàna monastic, avereno any an-tsainao ny zavatra tsy maintsy nanahaka an'i Glendalough tamin'ny androny - raha fialan-tsasatra ho an'ireo moanina mitady fihavanana izany. Saingy rehefa mivezivezy eny amin'ny havoana manodidina ianao dia mieritrereta an'i St Kevin izay notarihin'ny fahatoniana sy hatsaran-tarehy teo amin'ny taonjato faha-6. Mandehana mankamin'ny moron'ny rano eo amin'ny farihy ambony, alohan'ny handehanana mankamin'ny havoana maintso manodidina ny riandrano Poulanass, izay mianjera moramora amin'ireo vato mossy.
Mitondrà tena amin'ny sakafo amin'izao fotoana izao ao amin'ny toerana mahafinaritra sy milamina an'i Vanilla Pod any Kells.
County ThoroughbredFitsidihana voalohanyZavatra tokony hatao